De todito linuxero May-22: Overview fampahafantarana fohifohy momba ny saha GNU/Linux | Avy amin'ny Linux
Linux PostInstall | 01/05/2022 22:54 | Nohavaozina amin'ny 01/05/2022 23:02 | About us
Amin'ity famoahana vaovao ity amin'izao fotoana izao andiany digest vaovao isam-bolana antsoina hoe "Amin'ny linuxero rehetra" manolotra famintinana vaovao kely nefa tsara izahay hanombohana ny vaovao linux informative ny volana ankehitriny. Noho izany, avelantsika ity "Ny linuxero rehetra May-22".
Alohan'ny hanombohana an'ity ity publication ity ("De todito linuxero May-22") amin'ny vaovao sy vaovao mampahalala natomboka tamin'ity volana ity ny linux environment, avelao ho an'izay liana ny rohy mankany aminay Lahatsoratra mifandraika teo aloha momba ny fomba nanombohan'ny volana teo aloha. Mba hahafahan'izy ireo manao izany mora, raha te hampitombo na hanamafy ny fahalalany momba ny Vaovao GNU/Linux, amin'ny faran'ny famakiana ity publication ity:
"Amin'ity volana aprily ity, maro amin'ireo mpampiasa KDE Plasma no afaka mankafy ny vaovao fanavaozana bug fix, isan'ny kinova 5.24.4. Ny GNUCash, ity fitaovana rindrambaiko maimaim-poana ity eo amin'ny sehatry ny kaonty ara-bola ho an'ny tsirairay sy ny orinasa madinika, dia manana namoaka ny dikan-ny vaovao 4.10. Manomboka amin'ity volana aprily ity, ireo mpampiasa Finnix sy ireo hafa rehetra maniry, dia afaka mampiasa Finnix 124. Fizarana Linux mivantana, ahitana fitaovana an-jatony azo ampiasaina amin'ny fanarenana, fikojakojana, fitiliana". De todito linuxero Mar-22: Topimaso fampahafantarana fohy momba ny saha GNU/Linux
1 De todito linuxero May-22: Vaovao amin'ny fiandohan'ny volana
1.1 Vaovao vaovao: Avy amin'ny linuxero rehetra May-22
De todito linuxero May-22: Vaovao amin'ny fiandohan'ny volana
Vaovao vaovao: Avy amin'ny linuxero rehetra May-22
Unity 7.6 navoaka hanaovana fitiliana
Olona nankafy Ny tontolo desktop mahazatra an'ny Canonical, antsoina hoe Unity, nahazo vaovao tsara tamin’ireo andro farany tamin’ny Aprily. ny Birao firaisankina 7 no nivoaka voalohany (tsy ofisialy) tao anatin'ny enin-taona. Hitohy ny kinova vaovao Ubuntu 22.04, ary ahitana andiana fanamboarana kely sy fanitsiana amin'ny lafiny hita maso.
Amin'ny ankapobeny, ny fanambarana dia toy izao manaraka izao: «Ny Unity 7.6 no famoahana lehibe voalohany an'ny Unity ao anatin'ny 6 taona (Ny dikan-teny farany dia tamin'ny Mey 2016). Natombonay indray ny fampandrosoana mavitrika ny Unity7 ary havoaka famoahana vaovao misy endri-javatra maro kokoa tsy tapaka«. Ankoatra izany, ny azy endrika fametrahana sy lisitry ny fanovana ny Unity 7.6 dia azo trandrahana amin'ny fanambarana famoahana ny tontolo desktop. Mikaroka antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny loharano.
Vaovao momba ny ExTiX LXQt Mini 22.5, Build 220501
Ny ekipa fampandrosoana miandraikitra ny Distro ExTiX, androany voalohan'ny volana mey, dia nanambara a dikan-teny "mini" vaovao nohavaozina de ExTiX - Ny rafitra Linux farany indrindra. Ankehitriny, ity fizarana GNU/Linux ity dia hiorina amin'ny Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish. ary hanana a 1,3 GB ihany ny rakitra ISO, ho an'ny fampiasana tsara indrindra, haingana ary mahomby amin'ny kapila USB kely (2 GB) sy solosaina ambany loharano, ohatra, 2 GB an'ny RAM.
Ny zavatra tsara momba ity dikan-teny ity araka ny filazan'ny mpamorona azy dia izao manaraka izao: «Ny tsara indrindra amin'ny ExTiX 22.5 dia rehefa mandeha ny rafitra mivantana (avy amin'ny DVD/USB) na avy amin'ny kapila mafy azonao ampiasaina Refract Snapshot (voapetraka mialoha) mamorona ny ny rafitra Ubuntu 22.04 mivantana mivantana. Tena mora ny folo taona dia afaka manao izany! ExTiX 22.5 dia mampiasa ny kernel 5.17.2-amd64-exton. Ny Ubuntu 22.04 LTS dia ho tohanana hatramin'ny Aprily 2027. Noho izany dia azo atao ny mamorona respins ExTiX 22.5 miorina amin'ny Ubuntu 22.04, toy ny lehibe amin'ny MX Linux miaraka amin'ny MX Snapshot. Mikaroka antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny loharano.
Zephix v5 (Zephix-5R-20220430-x86_64) dia navoaka
Mifarana ny volana aprily, Namoaka version 5 ny mpamorona Zephix, an'ity GNU/Linux Distro ity. izay amin'ny ankapobeny a stable debian mifototra amin'ny rafitra linux mivantana. Saingy, mandeha tanteraka amin'ny haino aman-jery azo esorina izy io nefa tsy mikitika rakitra voatahiry ao amin'ny kapila rafitra an'ny mpampiasa. Ka ny tanjonao dia manome rafitra miasa modular sy maimaim-poana izay azon'ny mpampiasa entin'izy ireo ary ampiasaina na aiza na aiza misy solosaina finday na birao.
Ity dikan-teny vaovao ity dia ahitana ireto fanovana manaraka ireto: “Nohavaozina ny logos boot Syslinux sy GRUB mba hitaratra bebe kokoa ny lohahevitra Zephix; Safidy baotin'ny toram fanampiny - Zephix dia azo ampidirina ao anaty fitadidiana (raha ampy ny RAM). Ary koa, niova ny endri-tsoratra console default; Nampidirina tao amin'ny ISO ny maodelin'ny fikirakirana sy ny desktop mba hahatonga azy io ho azo ampiasaina kokoa. " Mikaroka antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny loharano.
Ny Open 3D Foundation dia mandray an'i Microsoft ho mpikambana fototra mba hampandroso ny hoavin'ny fampandrosoana 3D open source.
Ny troll patanty GNOME dia nesorina tamin'ny zony patanty.
Atrikasa LibrePlanet - 02 Mey - Mpandika teny sy rindrambaiko maimaim-poana, fampidirana azo ampiharina amin'ny OmegaT
Plymouth hanatsara ny fiantsoana maso ny GNU/Linux booting
Raketo podcasts avy amin'ny OBS
Raha fintinina dia antenainay izany "Ny linuxero rehetra May-22" miaraka amin'ny farany vaovao linux amin'ny Internet, amin'ity volana fahadimy amin'ny taona ity, «mayo 2022», tena ilaina amin'ny ankapobeny «Comunidad de Software Libre y Código Abierto». Ary mazava ho azy, izany dia mandray anjara amin'ny fahafantarana sy ny fanabeazana antsika rehetra «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » De todito linuxero May-22: Overview fampahafantarana fohy momba ny saha GNU/Linux
Ianaro izay vaovao ao amin'ny Android 1 beta 13